ဗြိတိသျှဘန်းစကားသည် 'အရက်မူး' သို့မဟုတ် 'လိင်' ဟုဆိုလိုပါကအမေရိကန်များကိုခန့်မှန်းရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ သူတို့၏အဖြေများသည်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဖြစ်သည် - သတင်း
ဗြိတိသျှဘန်းစကားသည် 'အရက်မူး' သို့မဟုတ် 'လိင်' ဟုဆိုလိုပါကအမေရိကန်များကိုခန့်မှန်းရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ သူတို့၏အဖြေများသည်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ယစ်မူးမူးယစ်ဆေးသောက်ခြင်း၊ ရေကန်တလျှောက်မှအိမ်နီးချင်းများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းတို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂန္ထဝင်အများဆုံးဘန်းစကားအချို့ကိုပြီးခဲ့သည့်ညကပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းလော ဒါရလဒ်ပါ။
ဘာလို့ဒီဟာကိုငြီးငွေ့စရာဟုဆိုလိုသနည်း ဒါကြောင့်ငါနင့်တနေ့လုံးက tugging ကနေအရမ်းငြီးငွေ့သောကွောငျ့ဒါငါဒါလိင်ဒါကြောင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးချွတ်လူရှုပ်သည်ငါ့သိ? အကူအညီတောင်းခံပါ။
သင်သိ, y'all မရှိတော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစူပါပါဝါဖြစ်ကြအဘယ်ကြောင့်စကားမပြောနိုင်သောဘန်းစကားများဤသည်ဖြစ်ပါတယ်။ Rogered (ငါသူသည်ငါ့ကိုတညလုံး rogered နှင့်မှန်ကန်သောအသံမပြောခဲ့ဘူးကြိုးစားခဲ့) လိင်အရာနဲ့တူအသံမပါဘူးဒါကြောင့်ငါအရက်မူးနှင့်အတူသွားမယ်။
tinder အပေါ်တစ်စုံတစ် ဦး အားအဘယ်သို့ပြောရမည်နည်း
တစ်ဖက်တွင်, သင်သည်ဤသည်ကိုသင်မခံမရပ်နိုင်အောင်အရက်မူးလာပြီနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒါကအရမ်းခက်ခဲနေတာကိုသင်မခံရပ်နိုင်ဘူးလား။ Side to Ariana Grande Side လိုမျိုးစက်ဘီးအခြေအနေလား? ဒီဟာကသောက်ခြင်းရော၊ လိင်ပါနှစ်မျိုးလုံးပြောနိုင်မှာပါ။ Grindr ကိုသာစစ်ဆေးပါ။
Randy ချိုနှင့်တူသည်မဟုတ်လော အိုးလိုပဲ, ထိုလူကလေး RANDY randy? ငါဒါကိုလုပ်နေသလား ငါကအဖျားအိပ်မက်တစ်မျိုးမျိုးမှာကြားခဲ့လား။ ငါသိသမျှအားလုံးသည်ဤအရာကိုကျွန်ုပ်ကြားရသောအခါမကြီးသောသွားများဟုငါထင်သည်။
ဒါကြောင့်ငါ့ရဲ့အသိဥာဏ်ကဒီဟာကိုအရက်မူးပြီးအတူတူပဲ၊ အရက်သောက်တာ၊ မူးတာပဲ၊ ဒါပေမယ့်ငါကလူတစ်ယောက်ကငါ့ကိုသဘောတူတဲ့နည်းနဲ့ဘက်လိုက်စေချင်တယ်။
ဒါကိုအမေရိကမှာပြောပေမယ့် ၁၉၉၇ လောက်ကတည်းကမဟုတ်ပါဘူး။
Sozz သည် fizzing မတိုင်မီသောက်သုံးရမည့်ဆူညံသံကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါဟာအရက်မူး ငါသိသမျှအားလုံးသည်လိင်အရာတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ လူတစ်ယောက်ကမင်းကိုနင့်တစ်ညလုံးနိုးနိုးကြားကြားရှိစေချင်တယ်ဆိုရင်၊ ငါရဲတွေကိုခေါ်မယ်။ သို့သော်ရယ်မောခြင်းမပြုမီငါအနည်းငယ် peed ။
အဆိုပါ duff တက်
သူတို့ရဲ့ tits ကိုချွတ်
ဗြိတိသျှလူမျိုးတွေနဲ့ tits ဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာလဲ။ ငါက၎င်း၏ပျော်စရာအမေရိကန်ဝမ်းကွဲ titties ကြိုက်တတ်တဲ့။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကရူးသွပ်တယ်လို့ပြောရင်ဗြိတိသျှလူမျိုးတစ်ယောက်ကကြေညာလိမ့်မယ်။ ကောင်းမြတ်ခြင်း ဝီလျံကသူ့ tits ချွတ်ရဲ့! ပြီးတော့ကြိုက်နှစ်သက်သောလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်သောက်ခြင်းကြိုက်နှစ်သက်သည်။ အိုကေတယ်၊ အရက်မူး
ငါ jubblies တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာသိ! Boobs! ငါသော်လည်း, ဒီကြိယာသို့ဘာသာပြန်ဆိုပုံကိုမသိရပါဘူး။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုငါလုံးဝနားလည်မှုလွဲခဲ့ပါသလား။ ငါ့ရဲ့ Boob တွေကို Lovely Jubblies လို့ချေါဖို့ Lush ဆီကလုပ်တဲ့မုန့်တစ်လုံးရှိတယ်။ အိုးထဲရောက်တိုင်းငါအရမ်းငိုတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ Boob များကိုမည်သူမျှမခေါ်ယူနိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်သည်တက္ကဆက်ပြည်နယ်မှဖြစ်သည်၊ သင်အသားအရေနှင့်တိရစ္ဆာန်များဖြစ်သည့်အခါ၎င်းကိုသားရေအစစ်အမှန်ဖြစ်စေရန်သင်ပုန်းအောင်းနေရမည်။ ငါဘာမှတိရိစ္ဆာန်ကိုမသတ်ဖူးဘူး၊ သားရေမ ၀ တ်ဘူးဆိုတာကိုငါဘာကြောင့်မင်းကိုဒီလိုပြောနေရတာလဲမသိဘူး။ ဒါပေမယ့်ထွက်ခွာသွားမူးယစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ သင် ... အခြောက်မှထွက်ဆွဲထား ... ဘာလို့လဲဆိုတော့
Lisa ကို Vanderpump တွင် Rumpy နှင့် Pumpy အမည်ရှိရွှေရှာဖွေစက်နှစ်ခုရှိပြီးသူမအမြဲတမ်းသူမ၏ခွေးများကိုလိင်နဂါးအဖြစ်ခေါ်ဆိုခြင်း၊
Chumbawumba ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါလည်းဗြိတိန်မှာ pissed ဆိုတာကဒီမှာနဲ့လုံးဝကွဲပြားခြားနားတာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။
ဒီ furries နှစ်ခုဟာလိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါကြိယာလား၊ ငါထင်တယ်အင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့လူတိုင်းကလျှို့ဝှက် (ဒါမှမဟုတ်သိပ်မလျှို့ဝှက်ဘူး) furry လို့ထင်တယ်၊ ဒါကငါရဲ့ရန်ပွဲသီချင်းပဲ။
ဒီဟာ toad-in-the-the-hole လိုပဲငါဘော်ဒါကျောင်းကကောင်လေးတစ်ယောက်ပြောနေတာကိုမြင်ယောင်ကြည့်မိသည်။ သူသည်အုပ်စုကြီးရှိသူ၏အခန်းဖော်များနှင့်အပြည့်အဝထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သည်။